NapannSan – Page 539 – Daily News
နေ့စဉ် ချက်ပြုတ်နေရတဲ့ အိမ်ရှင်မများ အတွက် အဆီအဖုလေး များ ပါရှိသည့် အသားများကို သတိထားပါ
By NapannPosted on March 5, 2019
ကျွန်တော် တို့ အမြဲစားနေကျ ဝက်သား ၊ အမဲသား ၊ ကြက်သား နှင့် တိရိစ္ဆာန် တို့၏ ဝမ်းတွင်း ကလီစာ များကို စားသုံးမည် ဆိုပါလျှင် အသား ဆိုလျှင် ယခု မြင်တွေ့နေရသည့် […]
တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ ရောက်သင့်ပီး နောက်မသွားသင့်တဲ့ နေရာ (သို့မဟုတ်) ရွှေစက်တော်
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လုပ်စားဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာတွေကတော့ တန်ခိုးကြီး စေတီပုထိုးတွေ ရှိတဲ့ နေရာတွေပါပဲ။ ဘုရားဝင်ဖူးလို့ ကားရပ်ထားရင် ကားပါကင်ဖိုး ကောက်တယ်။ ဓာတ်လှေကား နဲ့ တက်ရင် ဓာတ်လှေကားဖိုး ပေးရတယ်။ ဓာတ်လှေကားကြေးက သဒ္ဓါကြေး […]
အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်သွားရာ ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ယာဉ်ပေါ်ပါ သံဃာ(၅)ပါး ကျား(၂၆) မ(၁၁) ဦး စုစုပေါင်း ၄၂ ဦး ပါရှိသည့်အနက် ဒဏ်ရာ ရကျား ၁၆ ဦး မ ၉ ဦး(သံယာ တစ်ပါးအပါ)
မတ်လ (၅) ရက်နေ့ နံနက် (၀၆၀၀) နာရီ အချိန်ခန့် နေပြည်တော်-ရန်ကုန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၇၇/၃-၇၇/၄ ကြား တွင်ယာဉ်မောင်း ဥိးဝင်းထွန်း.၃၈ နှစ်. နယ်မြေ.၂ .ကလေးမြို့ နေသူမောင်းနှင်လာသည့် 6G/4—High class(ကလေး. -ရန်ကုန်)ခရီးသည်ယာဉ်သည် […]
ငွေကုန်ကြေးကျခံ ခွဲစိတ်နေစရာ မလိုတော့ပဲ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာ သက်သာသွားသည့် ဆေးနည်း…!
နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။ နုလုံး အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ ထို သူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှ […]
မန္တလေးကျုံး အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ လမ်းဘေး သန့်စင်ခန်း စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
မန္တလေး မြို့ ၆၆ လမ်း၊ ၁၄ လမ်း၊ ကျုံး အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ထပ်မံ တည်ဆောက်ထားသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အများသုံး လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်းကို မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဟု မန္တလေးမြို့တော် […]
ဓားဒဏ်ရာ အချက်ပေါင်းများစွာဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသတ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ် တရားခံအား တစ်လကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေး
ပဲခူးခရိုင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ပျဉ်းမလွင်ကျေးရွာ ရှိ လယ်ကွက်အတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး အား ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ အချက်ပေါင်းများစွာများဖြင့် အသတ်ခံရသည်ဖြစ်စဉ်မှ တရားခံအား တစ်လခန့် ကြာသည်အထိ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဖောင်တော်သီ နယ်မြေရဲစခန်း ထံမှသတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်နဝါရီလ […]
တွဲကား ယာဉ်တစ်စီး ပုံညာတောင် အဆင်းတွင် ဘရိတ်ပေါက်၍ ချောက်ထဲထိုးကျ
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ကျောမြို့၏ အနောက်ဘက် ပုံညာတောင် အဆင်း သရက်ပင်ကွေ့ ၇၇ မိုင် ၃ ဖာလုံနှင့် ၄ ဖာလုံအကြား ယခုလ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီ […]
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာ အရက်မူးနေ တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်း အတွင်းဝင်ပြီး အော်ငိုကာ ထမီချွတ်ချ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်၊ကျောင်းလမ်းရှိ ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်(ရွှေဝါရောင်ပညာဌာနကျောင်း) ပုရဝုဏ် ဝင်းအတွင်းသို့ မတ်လ ၄ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က အရက်သေစာ သောက်စားထားသည့် အမျိုးသမီး တဦး ဝင်ရောက်လာပြီး အော်ဟစ် […]
သားမယားပြုကျင့်ခံရခါနီး ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ၆နှစ် အရွယ် ကလေးမလေး
By NapannPosted on March 4, 2019
မြဝတီမြို့၊ ည​ဈေးအနီး​နေသည့်​ အသက်​၆နှစ်​ အရွယ်​ ခ​လေးအား သားမယားပြုကျင့်​ရန်​ အားထုပ်​သူ……. တရားခံ သိန်း​အေး၊၂၇နှစ်​အား မြဝတီရဲစခန်းမှ…… (ပ)၃၁၉/၂၀၁၉ ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ၃၇၆/၅၁၁တို့ဖြစ် ​အမှုဖွင့်​အ​ရေးယူထား​ကြောင်းသိရှိရပါသည်​။ တရားလို…..မ….၏တိုင်​ကြာချက်​အရ ၎င်းသည်​အခင်းဖြစ်​​ ည​၈နာရီခန့်​တွင်​​နေအိမ်​သို့ပြန်​​ရောက်​လာစဉ်​ သမီးဖြစ်​သူ….မ….၆နှစ်အား​တွေ့ဆုံစဉ်​ သမီးဖြစ်​သူနှင့်​သူငယ်​ချင်​​မောင်​…………၈နှစ်​တို့၏​ပြောကြာချက်​အရ ည​နေ၆နာရီအချိန်​တွင်​…….. တရားခံသိန်း​အေးမှ […]
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လေထု ကို ထာဝရ သန့်စင်နေအောင် ပြန်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ရှာဖွေတွေ့ရှိ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကာဗွန်ဒိူင်အောက်ဆိုဒ် ကို ကျောက်မီးသွေး အဖြစ် ပြန်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါကြောင့် လေထုကို အမြဲ သန့်စင်နေအောင် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်တော့မှာပါ။ Ground breaking နည်းစဉ်ဟာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို […]